“18 sano ayay shaqo raadis ahayd” | Somaliska
Qisadaan waxay ku dhacday haweeney soo galooti ah oo ku nool magaalada Borlänge oo mudo 18 sano ah shaqo raadis ku jirtay.
Haweeneyda lagu magacaabo Borka Markovic oo 63 jir ah waxay Sweden soo gashay mudo ka hor iyadoo 18 sano baadi goob ugu jirtay sidii wadankaan ay shaqo uga heli lahayd oo nolol fiican uga abuuri lahayd balse meelkasta oo ay shaqo ka dalbaday waxaa loogu soo jawaabay “waanka xunahay” ama “tyvärr”.
Waraysi ay siisay idaacada Sverige ayay Borka ku cataabtay miraha ka soo bixi waayay dadaalkii ay u gashay in ay shaqo ka hesho Sweden. Waxay sheegtay in marar badan looga wacay xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) kuwaasoo ay sheegtay luuqada keliya ee ay ku hadlaan in ay tahay “måste, måste” ama waa in aad sidaa samaysaa iyo sidaas. Borka waxay sheegtay in uusan qofku lahayn xoriyad uu ku go’aamiyo waxa uu doonayo balse horay loogu go’aamiyay. Waxay intaas ku dartay in loo diray baraatiik badan oo aysan ku helin wax shaqo ah .
Mar la waydiiyay haddii ay jeceshahay in ay wadankeedii ku laabato ayaa jawaabta Borka waxay ahayd mid aan ka leexleexad lahayn. Haa, ayay tiri “barito ayaan duuli lahaa haddii aan fursad haysto balse wax aan ku laabto ma jiraan.”
Qisada haweeneydaan ayaa tusaale u ah cabashooyin badan oo ay qabaan soo galootiga. Shaqo la’aanta ka sakoow ayaa waxaa u dheer in aysan jirin xoriyad mar haddii uu qofku lacag ka qaato xafiiska cayrta.
Asc mr jimcale wana ku mahadsantahay warbixinada sida wanagsan u so gudbisan shaqada waa muhim balse Rajada alle lagama quusto marka wax kheyr qabo allah no keeno
Waan ka xumahay , LAAAAKIIN maskiintaan Calafkeedii Shaqo ayaan Allee u qadarin , Boqorka Swdeen xitaa hadii uu FASTjobb ku siiyo Allena qadarin ,
mala helaayo marka way dadaashay waana sidii loo baahnaa .
Allese kuuma qadarin , macnaheeduna maahan in Alle Hagraday , laakiin shaqaduba ineey shar u ahaan lahayd laga yaabee, Allah ka xijaabay
….Sida Allah Quraanka noogu bayaamiyay …
…وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم……
Laga yaabee inaad , arin karhataan , khayrse idiin yahay ….
Sidoo kale laga yaabee in aad wax jeclaataan , balse Shar idiin yahay…
Anigu shakhsi ahaan Borlänge aan degana Shaqana Allaah waa iga siiyay , dalkana mudo 4 sano iyo badh ah ayaan Joogaa….. ALXAMDULILLAAH ….
Haddaan Shaqo dalbado oo la isiin waaye , waxaan u qaadanaa Xikmad Alle ineey ku jirto inaan waayay… haddaan helana waan SHUKRINAA
Muslimku mar walbaa Alle ayuu leeya kuna kalsoonya , sida GAALADA dabaqyada ama tareenada naftiisa kuma GOOYO ..
.Muslimkuna MA QUUSTO .
Killen från Borlänge warkaagu waan ladhacay sxb marka waadna kumahadsantahay anagana sidaa sheegtaan yeelaynaa oo waan sabraynaa insha Allah w.w.w.
Borka waa dadaashay laakiin nasiibka ka hiiliyey.
asc wallayaal sweden shaqo maa talo wallhi baratigna baarkaa leygaga tumaaay lkin dhibkaan ankaa soo donany
May 28, 2012 at 05:17
akhyaarta salan sare shekada inaba caadi ma ahan….run ahaanteee dhawahaan qarada yurup shaqo la aan ayaa ka jirta……waxaad mahad leh ilaah oo naga dhigay dad muslim ah…oo garanaya wuxuu ilaah ku qorin in aad heleynin…waayo galada shaqo la aan haddii ay ku dhacdo 95% way is dilaan…waa waxaaan ilaaah aqoonnin. ………subxanalaah…. akhyaarta wajibaad ilaah na faray aan laga tagin waxasta way iska fudanayaan inshaaa ilaaah ku xirnaada ilaah walaalaha qeyrka jaceyl